Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Chicken Burgers nataon'i Longo Tadidina izao
Ny Belmont Meat Products Ltd. dia mampahatsiahy ny marika Longo Chicken Burgers amin'ny tsena satria mety misy atody izay tsy voalaza ao amin'ny marika. Ny olona manana allergie na tsy fahazakana ny atody dia tsy tokony hihinana ny vokatra voatadidy voalaza etsy ambany.
Ity vokatra manaraka ity dia amidy any Ontario.
Longo's Mpivarotra akoho 852 g (6 x 142 g) 7 72468 03418 6 Tsara indrindra talohan'ny 2022 MR 09 2022 MA 13 2022 JN 28
Raha misy allergie na tsy fahazakana amin'ny atody ianao dia aza mihinana ilay vokatra averina fa mety hiteraka fanehoan-kevitra matotra na mahafaty.
Ity fahatsiarovana ity dia nateraky ny valin'ny fitsapana ny maso ara-tsakafo kanadianina (CFIA). Ny CFIA dia manadihady momba ny fiarovana ny sakafo, izay mety hitarika ny fampahatsiahivana ireo vokatra hafa. Raha tadidio ireo vokatra hafa mety hampidi-doza, dia hampandre ny besinimaro amin'ny alalàn'ny fampitandremana momba ny Food Recall Warnings ny CFIA.
Fanehoan-kevitra Tsy mbola nisy fanehoan-kevitra mifandraika amin'ny fihinanana ity p